Dagaalkii Oromada & Shucuubta Koonfureed oo Faraha Kabaxay. | ogaden24
Dagaalkii Oromada & Shucuubta Koonfureed oo Faraha Kabaxay.
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in uu faraha kabaxay dagaalkii udhaxeeyay qoomiyadaha Guji iyo Gedio ee todobaadkan kasocday xuduuda Gobolada Oromia iyo Shucuubta Koonfureed.
Dagaaladan oo bilowday laba bari kahor ayaa lasheegayaa in uu hada gaadhay meel aan waxba laga qaban karin waxaana lasheegayaa in dagaalka labada qoomiyadood uu kufiday deegaano hor leh oo ku teedsan xuduuda labada Gobol ee Oromia iyo Shucuubta Koonfureed.
Dagaaladan ayaa lasheegayaa in ay sababeen bara kac aad ubaaxad wayn waxaana lasheegayaa in ay barakaceen 40 kun oo qof oo shacab ah, kuwaas oo gaadhay deegaanada ay ood wadaagta yihiin oo ay isleeyihiin waxaad kahelaysaan nabad iyo nolol.
Goob jooge kusugan xuduuda labada qoomiyadood ayaa sheegaya in lagubay qaybo kamid ah Dagmada Qarja, halka Tuulada Alifarade gabi ahaanteedba dab laqabadsiiyay, sidoo kale goob joogaha ayaa sheegaya in ay jiraan deegaano kale oo xuduuda udhaw oo lagubay.
Waxaa adag in la ogaado Khasaaraha dhabta ah ee dagaaladan ay gaysteen, maadaama oo dagaaladu ay kasocdaan dhulka miyiga ah ee fo, hase yeeshee waxaa dagaalkii ugu dambeeyay ee shalay lagu dilay 12 qof oo dhinacyadii dagaalamayay ah.
Majiro wax dhex dhexaadin ah oo taliska wayaanuhu uu kadhex wado labada qoomiyadood ee dagaalamaysa, waxaana lasheegayaa in uu jiro hub iyo rasaas ay ciidamada wayaanuhu siiyeen dhinacyada dagaalamaya.
Xukuumada gumaysiga ayaa dhaqan ahaan faa’iido u aragta dagaalada noocan oo kale ah, waxayna xukuumadu aaminsan tahay in shacabka oo isku mashquula ay yaraynayso culayska siyaasadeed ee xukuumada kasaaran dhinaca shucuubta kala duwan.